> Resource> Video> Olee otú iji tọghata Audio na MP4 / MKV si AC3 ka AAC
AC3 audiotracks nwere ike ẹdude ke iche iche format containers, dị ka MP4, na MKV, wdg Videos na AC3 audio-apụghị keere QuickTime, iTunes, nakwa dị ka iPad / iPhone / iPod / Apple TV, wdg Ma ndị a media egwuregwu nwere ike itapia AAC tracks. Nke ahụ bụ ya mere ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ iji tọghata audio nke onye MKV (ma ọ bụ MP4, wdg) si AC3 ka AAC. Ọ bụrụ na ị na-mkpa iji tọghata AC3 ka AAC, a dị ike na ọrụ ngwá ọrụ pụrụ inyere gị aka ime nke a ọrụ ahụ ngwa ngwa na-adị mfe.
Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac) na-akpan iji tọghata ọ bụla na-ewu ewu video na ọdịyo faịlụ. Ị nwere ike ọ bụghị naanị ịgbanwe gị video & ọdịyo faịlụ site na otu usoro akpa ọzọ, kamakwa mfe ịgbanwe ọdịyo esochi gị video faịlụ ndị ọzọ ọdịyo egwu. Nke ahụ bụ na-ekwu, i nwere ike iji nke a oké omume iji tọghata AC3 ọdịyo faịlụ ka AAC ọdịyo faịlụ, nakwa dị ka tọghata AC3 audio egwu iji AAC audio track mgbe idebe video format ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe video usoro.
N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị ihe zuru ezu ndu. Ọ bụ ya mere mfe, dị nnọọ atọ mfe nzọụkwụ.
1 Ibu Ibu videos faịlụ na AC3 codec ma ọ bụ AC3 ọdịyo faịlụ
Nke mbụ niile, chọta vidio faịlụ na e dere AC3 ọdịyo egwu na PC gị na, na mgbe ahụ kpọmkwem ịdọrọ faịlụ na ị chọrọ site na kọmputa a software akakabarede ebi ndụ. N'ezie, e nwere bụ ụzọ ọzọ i nwere ike iji mbubata gị video faịlụ. Dị nnọọ pịa bọtịnụ na usoro si window. N'ihi na AAC ọdịyo faịlụ, ị nwere ike iji otu ụzọ mbubata ha.
2 Họrọ AAC dị ka mmepụta ọnọdụ
Ugbu a, i kwesịrị iji họrọ otu mmepụta usoro. Mepee adaala format ndepụta na "mmepụta Format" panel, na-aga "usoro"> "Video" iji họrọ MKV ma ọ bụ MP4 dị ka mmepụta usoro. Ọzọ, gaa na ala nke "mmepụta Format" panel, wee pịa "Mwube" nhọrọ. Na mmapụta "Isetịpụ" window, ị nwere ike ịtọ AAC dị ka ọdịyo encoder.
Ọ bụrụ na ị mbubata AC3 ọdịyo faịlụ ke nzọụkwụ 1, ị dị nnọọ mkpa họrọ "Format"> "Audio"> "AAC" na ya mmepụta format ndepụta.
3 tọghata AC3 ka AAC
Ke akpatre, pịa "tọghata" button na ala n'aka nri akuku nke window na-amalite AC3 ka AAC akakabarede. Ozugbo, ị pụrụ ịhụ green akakabarede ọganihu mmanya. Mgbe mgbe, niile akakabarede aga-eme ga-completetd. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike na-pịa nchekwa akara ngosi na ala nke a na window aka ịchọta ndị a converted faịlụ. Ugbu a, dị nnọọ onwe gị obi ụtọ.
XviD cutter: Olee otú Bee XviD Files
Splice Video Editor maka PC: Easily Dezie Videos on PC